Kusoo helista Likes-ka Dheeraadka ah Xayeysiiska 'Instagram': 8 Dhaqanka Ugu Wanaagsan ee La Raaco | Martech Zone
Helitaanka Jeclaalo Badan Xayeysiisyada 'Instagram': 8 Hab-dhaqannada ugu Wanaagsan ee La Raaco
Isniin, Oktoobar 21, 2019 Arbacada, Oktoobar 14, 2020 Douglas Karr
Tartanku wuxuu ku sii kululaayaa barxadda in kastoo, haddana astaamaha ayaa raadinaya inay sida ugu badan uga faa'iideystaan ​​ololahooda xayeysiiska ee 'Instagram'. Hal nooc oo nooc ayaa adeegsanaya si loo qiyaaso kaqeybgalka, iyo qiimaha sumcadda ayaa helaysa waxyaabo badan oo jecel. Waxaan ka hadlaynaa xeelado hagaajin kara tirada waxyaabaha aad ka heli karto xayeysiiskaaga koontadaada sumadda.
Ku hel waxyaabo badan oo jecel xayeysiiska 'Instagram'
Jeclku waxay muhiim u yihiin guusha olole kasta oo ka socda Instagram. Waxay muujineysaa kaqeyb qaadasho iyo ujeedo isticmaaleyaasha, taas oo macnaheedu yahay inaad udhaqaaqeyso jihada saxda ah. Taasi waxay tiri, way adkaan kartaa in dadku ku jeclaadaan qoraaladaada, gaar ahaan haddii aad tahay nooc hadda bilaabanaya. Waxaan soo bandhignay habab qaarkood oo kaa caawin kara inaad ku kasbato tirada ugu badan ee jecel astaantaada.
1. La wadaag Sawirro iyo Fiidiyowyo Tayo Sare leh
Habka ugu wanaagsan ee aad ugu dammaanad qaadi karto waxyaabaha ku jira koontadaadu waa markaad dhajiso waxyaabo tayo sare leh. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay arrinta xayeysiiska maxaa yeelay waxaa arki doona dad aad u tiro badan oo aan ka ahayn kaliya kuwa raacsan. Noocyada badankood waxay qaataan dadaal badan si ay u hubiyaan in xayeysiisyadoodu madaxyo badan u rogaan. Olole xayeysiis ah oo sifiican loo fuliyay ayaa leh fursado badan oo lagu faafin karo, iyadoo lagu dhex jiidanaayo sumadda. Waa tan tusaale xayeysiin tayo sare leh oo ku taal barta 'Instagram'
2. Abuur Qoraallo wanaagsan
In kasta oo soo jiidashada ugu weyn ee Instagram ay tahay inay tahay madal muuqaal soo jiidasho leh, qoraalladu waxay ku soo dhowaadaan ilbiriqsi marka ay timaado noocyada soo bandhigaya hal-abuurkooda. Qoraallo wanaagsan ayaa la helay si loo kordhiyo ka warqabka astaanta iyo soo celinta magaca gargaarka. Sidoo kale, qoraalka waa qayb ka mid ah qoraalkaaga oo aad dib ugu soo noqon karto si aad u hesho waxyaabo badan oo dheellitiran haddii sawirku aanu ku filnayn. A qoraal soo jiidasho leh sidoo kale waxay heli karaan kuwa raacsan oo faallo bixiya, taas oo si weyn u wanaajin karta ka qaybqaadashada.
3. U adeegso CTAs iyo Hashtags si xikmad leh
Hashtags iyo CTAs (wicitaan ficil) waxay ku fiican yihiin inay dadku ka qayb galaan, waa haddii aad si sax ah u isticmaasho. Hashtags waa qayb muhiim ah oo ka mid ah Istaraatiijiyada hawlgelinta Instagram. Si aad xayeysiimahaaga u gaarsiiso dadka kuu dhow, u isticmaal hashtags maxalli ah xayeysiimahaaga 'Instagram'. Sidoo kale, waad kari kartaa fiiri hashtags caan ah niche-kaaga si aad xitaa ugu hesho kuwa raacsan koontadaada.
CTA-yada waxaa loo isticmaalaa in lagu qanciyo dadka si ay u fuliyaan tallaabo go'aan ah koontadaada 'Instagram'. CTA-yada waa kuwo macno leh, waxaadna u baahan tahay inaad fahanto meesha iyo sida loo isticmaalo. Dadku waxay kaliya ku biiri doonaan CTA haddii ay jiraan wax qiimo leh oo aad siiso iyaga. Abuuritaanka dareenka degdegga ah markaad isticmaaleyso CTAs waa istaraatiijiyad wanaagsan. Oraahda sida hadda guji si aad wax badan uga ogaato, la heli karo oo keliya wakhti xaddidan waa tusaalooyin wanaagsan oo aad ku heli karto dadka gujinaya.
4. Raadi Waqtiyada Dhajinta ee Fiican
Dhinac muhiim ah oo ka mid ah kaqeybgal badan koontadaada ayaa ah inaad hubiso in waqtiyadaada dhajinta xayeysiinta ay ku soo beegmayso marka kuwa raacsan ay yihiin kuwa ugu firfircoon. Ma jiro qof “waqtiga saxda ah ee wax lagu qoro” barta Instagram - way ku kala duwan tahay noocyada ganacsiga iyo bartilmaameedka goobta. Taasi waxay tiri, sharciga guud ee suulka si loo soo jiito macaamiisha waa in lagu dhajiyo inta lagu jiro saacadaha shaqada ka baxsan inta lagu jiro maalin sida qadada (11: 00 am to 1: 00 pm) ama shaqada kadib (7: 00 wakhti xaadirkan 9: 00 pm). Taasi waxay tiri, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tixgeliso goobta aad beegsanayso sidoo kale. Waxa kale oo jira qoraal aad u faahfaahsan oo laxiriira waqtiga lagu dhajinayo barta 'Instagram' Hubspot in aad iska hubin karto.
Instagram waxay ku habboon tahay dhajinta barxadda, taas oo ka dhigaysa barxad weyn kor u qaad ganacsigaaga on. Waad u adeegsan kartaa quudintaada 'Instagram' 'isha aad ka heleyso cusbooneysiinta barnaamijyada kale sida Facebook iyo Twitter. Tani waxay si gaar ah uga shaqeyn kartaa danahaaga markaad qabaneyso tartamo. Dadku waxay jecel yihiin ku guuleysiga tartamada, sidaas darteedna helitaanka ereyga barnaamijyada kale ee warbaahinta bulshada ayaa kaa caawin kara inaad hesho soo-gaadhis dheeraad ah oo ku saabsan astaantaada. Sidoo kale, noocyo badan ayaa adeegsada URL-ka noloshooda si ay ugu xirmaan boggooda Facebook halkaasoo aad uga hagaajin karto URL-yada kale.
6. Like Iyo Faallo Ku Saabsan Meelaha La Xiriira
Qaab kale oo aad ku abuuri karto xiisaha koontooyinka la xidhiidha isla halbeegga ayaa ah markaad qaadatid wakhti aad kula macaamisho koontadooda. Instagram had iyo jeer waxay ku shaqeysay sharci fudud - hawlgelinta kaqeybgalka. Marka markaad la macaamisho koontadooda, waxaad kordheysaa fursadahaaga inaad kaqeyb gasho iyaga sidoo kale. Waxaad sidoo kale halkaa ka heli kartaa kuwa raacsan oo badan oo xiiseynaya koontadaada, taas oo macnaheedu yahay inbadan oo jecel koontadaada mustaqbalka fog.
7. Ku soo biir barnaamijka 'Pod Engagement Pod'
Boodhadhku waa fariin toos ah oo udhaxeysa koox shaqsiyaad ah oo isku meel kuwadaagan barta Instagram isla markaana doonaya inay kobciyaan kuwa raacsan, waxyaabaha ay jecelyihiin, ama aragtidooda. Aasaaska aasaasiga ah ee boodhadh kasta ayaa ah in markasta oo xubin ka mid ah boodhadhka uu soo qoro waxyaabo cusub, dadka ku jira qadka laga filayo inay la falgalaan. Tani waxay ka caawineysaa boostada inay gaarto meesha ugu sarreysa ee raacayaasheeda. Dadku waxay isticmaaleen jiingado tan iyo markii Instagram ay isbedel ku sameysay algorithm-keeda. Cusboonaysiinta qoraalku waxay soo bandhigeysaa iyadoo loo eegayo caan ka noqosho ahaan.
8. Xayeysiiskaaga Ka Dhig Mid Aragti Ahaan Leh
Mid ka mid ah hababka ugu dabiiciga ah ee lagu heli karo waxyaabo badan oo xayeysiiskaaga ah ayaa ah in diiradda la saaro tayada waxa ku jira. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in xayeysiimahaagu ay leeyihiin tayo ku filan iyaga, si ay uga soo baxaan waxyaabaha intiisa kale. Tan waxaa ka mid ah adeegsiga sawirro hal abuur leh oo hufan si loo soo jiito dareenka dhagaystayaasha. Tusaale sida noocyadu tan u sameeyaan -
Starbucks waxay lahaayeen a #FrappuccinoHappyHour ololihii oo faafay. Waxay tan ku dhammaystireen midabbo dhalaalaya iyo adeegsi hal abuur leh oo asalka ah si ay u abuuraan wax u gaar ah oo kuwa raacsan ay jeclaayeen.
Isku soo wada duub - Qof kastaa wuxuu ka heli karaa jecel Instagram
Isdhexgalka raacayaashu waa qayb weyn oo ka mid ah Instagram shaki la'aan, iyo waxyaabaha jecel Instagram waa habka ugu caansan ee dadku u adeegsadaan inay ogeysiiyaan magacyadooda inay jecel yihiin (ciqaab looma jeedin!) Noocyada ayaa lacag aad u fara badan ku bixiya xayeysiinta, mararka qaarkoodna ma awoodaan inay ku shaqeeyaan.
In kasta oo helitaanka waxyaalo badan oo xayeysiis ah aysan ahayn wax dhib badan, waxaad u baahan tahay inaad diiradda saarto wax ka badan dhinacyo dhowr ah si aad u hubiso inaad si sax ah u saxdo. Waxyaabaha sida waqtiyada dhajinta, tayada sawirka, iyo qoraalada ayaa ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah tixgelinta haddii aad rabto kuwa raacsan inay ka jawaabaan. Tilmaamahan waa inay ku siiyaan xoogaa fikrado ah oo ku saabsan sida ugu badan ee looga faa'iideysan karo ololeyaasha xayeysiiska 'Instagram'. Ha wadaagin sida aad awood ugu yeelatay inaad dib u habayn ugu sameyso istiraatiijiyaddaada xayeysiinta si aad u hesho natiijooyin wanaagsan.
Waxyaabaha Ay Tahay Inay Ogaadaan Si Ay Ugu Bilaabmaan Kusoo Kordhinta Dhageysteyaal Badbaaday Facebook